သူမတို့မိသားစုရဲ့ငယ်ဘ၀အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့အတူ အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုပေးလာတဲ့ ယွန်း၀တီလွင်မိုး – XB Media Myanmar
သူမတို့မိသားစုရဲ့ငယ်ဘ၀အမှတ်တရပုံလေးတွေနဲ့အတူ အဖေများနေ့ကို ဂုဏ်ပြုပေးလာတဲ့ ယွန်း၀တီလွင်မိုး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…..အကယ်ဒမီမင်းသားချောကြီး ဦးလွင်မိုးရဲ့သမီးလေးဖြစ်တဲ့ ယွန်း၀တီ လွင် မိုး ကိုပရိတ်သတ်ကြီးအားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ သူမဟာ သာယာ‌ချမ်းမြေ့ ဖွယ် မိသားစုဘ၀လေးကိုတည်ထောင်ထားတာဖြစ်ပြီး ချစ်စရာသားငယ်လေးတစ် ယောက် ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ယွန်း၀တီလွင်မိုးရဲ့သားလေး လွင်ထက်(ခေါ်)Liam လေးဟာ လုံးလုံးကစ်ကစ်လေးနဲ့ အသည်းယားစရာကောင်းအောင်ကို ချစ်မွှေးပါသူ လေး ပါနော်။
ယွန်း၀တီလွင်မိုးဟာ အခုလက်ရှိမှာဆိုရင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူ ဩစတြေးလျမှာပညာ သင်ကြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ မြန်မာပြည်ခဏပြန်လာစဉ်မှာလည်း အနုပညာလှု ပ်ရှားမှုတွေကို ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကားကြီးပါရိုက်ကူးထား တာဖြစ် ပါတယ်။
ဒီနေ့ ဇွန်လ 21ရက်နေ့လေးဟာဆိုရင်လည်း အဖေများနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက လည်း ယွန်း၀တီလွင်မိုးဟာ သူမရဲ့facebookစာမျက်နှာတွင်” Happy Fathers Day I miss you so much ဖေဖေ. I love you.” ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူ မိသားစုအမှတ်တ ရပုံလေးတွေတင်ပေးလာပါတယ်။ ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်နော်။
Source-Yun Waddy Lwin Moe’s Facebook acc
Photo credit-Yun Waddy Lwin Moe’s Facebook acc
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…..အကယ္ဒမီမင္းသားေခ်ာႀကီး ဦးလြင္မိုးရဲ့သမီးေလးျဖစ္တဲ့ ယြန္း၀တီ လြင္ မိုး ကိုပရိတ္သတ္ႀကီးအားလုံးသိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ သူမဟာ သာယာ‌ခ်မ္းေျမ့ ဖြယ္ မိသားစုဘ၀ေလးကိုတည္ေထာင္ထားတာျဖစ္ၿပီး ခ်စ္စရာသားငယ္ေလးတစ္ ေယာက္ ကိုလ ပိုင္ဆိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယြန္း၀တီလြင္မိုးရဲ့သားေလး လြင္ထက္(ေခၚ)Liam ေလးဟာ လုံးလုံး ကစ္ကစ္ေလးနဲ႔ အသည္းယားစရာေကာင္းေအာင္ကို ခ်စ္ေမႊးပါသူ ေလး ပါေနာ္။
ယြန္း၀တီလြင္မိုးဟာ အခုလက္ရွိမွာဆိုရင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔အတူ ဩစေၾတးလ်မွာပညာ သင္ၾ ကားေနတာျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ ျမန္မာျပည္ခဏျပန္လာစဥ္မွာလည္း အႏုပညာလွု ပ္ရွား မွုေတြကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္သြားတာျဖစ္ၿပီး ႐ုပ္ရွင္ကားႀကီးပါရိုက္ကူးထား တာျဖစ္ ပါတယ္။
ဒီေန႔ ဇြန္လ 21ရက္ေန႔ေလးဟာဆိုရင္လည္း အေဖမ်ားေန႔ေလးျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီက လည္း ယြန္း၀တီလြင္မိုးဟာ သူမရဲ့facebookစာမ်က္ႏွာတြင္” Happy Fathers Day I miss you so much ေဖေဖ. I love you.” ဆိုတဲ့စာသားေလးနဲ႔အတူ မိသားစုအမွတ္တ ရပုံေလးေ တြတင္ေပးလာပါတယ္။ ပရိတ္သတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္မၽွေဝေပးလိုက္ပါ တယ္ေနာ္။
အဖေများနေ့မှာ ကွယ်လွန်သွားခဲ့ တာ(၁၀)နှစ်ပြည့်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကိုရည်စူးပြီး အလှူအတ န်းတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့ ချယ်ရီသင်း
အကယ္ဒမီမ်ားရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမသန္းႏု ယေန႔ ေထာင္မွ လြတ္ေျ မာက္လာပါၿပီ